Sidee loo dhigaa iPhone 11 cusub DFU, dami ama qaab soo kabasho | Wararka IPhone
Sida loo dhigo iPhone 11 cusub DFU, dami ama qaabka soo kabashada
Jordi Gimenez | | iPhone 11, Casharrada iyo buugaagta
Maanta waxaan arki doonnaa tallaabooyinka ay tahay inaan raacno - si loo dhigo nooca cusub ee iPhone 11, 11 Pro ama iPhone 11 Pro Max, qaabka DFU, qaab-kabashada ama dami. Taasina waa haddii aad tahay isticmaale ka soo jeeda iPhone ka hor iPhone X, waa inaad la qabsataa inaad noqotid badhanka guriga taasna waxay saameyn buuxda ku leedahay qaar ka mid ah shaqooyinkan aan soo sheegnay.
Micnaha fudud ee DFU (Cusbooneysiinta Qalabka Qalabka) Kuwa aan garanayn, waa ikhtiyaarka aan haysanno si aan iPhone ama iPad toos ugu xirno iTunes oo noo oggolaanaya inaan ku rakibno qalabka aan dooneyno inaan horay u soo dejisanno nafteena. Habka dib u soo kabashada ee dhinaca kale, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka soo kabano qalabka haddii ay jiraan dhibaatooyin, waxay u oggolaaneysaa inay soo celiso ama cusbooneysiiso qalabka iTunes. Waa hab si xoog leh loogu xiro iTunes si ay u daryeeli doonto cusbooneysiinta ugana soo ceshano iPhone-ka.
1 Sida loo damiyo iPhone-keena 11, iPhone 11 Pro ama Pro Max
2 Sida loo dhigo habka DFU ee iPhone 11
3 Habka soo kabashada ama «habka soo kabashada». Sidan ayaa loo hawlgeliyaa
Sida loo damiyo iPhone-keena 11, iPhone 11 Pro ama Pro Max
Laakiin waxaan u soconaa tan ugu aasaasiga ah tanna waxaan ku bilaabi doonnaa shaqada daminta qalabka. Xaaladdan oo kale, badhanka jirka ee midigta, oo si joogto ah loo cadaadiyo, wuxuu kiciyaa Siri, markaa waa inaan riix oo hayso badhanka midig isla waqtiga mid ka mid ah dhinaca bidix si aad u kordhiso ama u yaraato mugga, ilaa qoraalka "slide si aad u demiso" u muuqdo. Hadda waxaan awood u yeelan doonnaa inaan si toos ah u deminno aaladda iyadoo aan shaashadda ku dhajineyno illaa ay damineyso.
Waxaan sidoo kale dhaqaajin karnaa Wicitaanka degdegga ah ee SOS oo fiiri xogta caafimaadka haddii ay dhacdo in iPhone-ku uusan annagaa lahayn, haddii ay dhacdo inaan ku caawinno qofkaas. Qodobkani waa muhiim qof walbana waa inuu ka feejignaadaa xulashadan aaladaha Apple. Tani waxay si toos ah u muujineysaa xogta qofka sida magaca, da'da, culeyska iyo cabirka iyo sidoo kale lambar taleefan oo lala xiriiro haddii ay xaalad degdeg ahi timaado.
Sida loo dhigo habka DFU ee iPhone 11
Waxa soo socdaa waa heer aad u horumarsan oo ah in gelinta iPhone-ka ee DFU aysan ahayn in qof walba sameeyo. Markii aan karti u adeegsano iPhone-ka waxaan wax ka beddeli karnaa qalabka qalabka iyo tan oo ku jirta gacanta dadka aan khibradda lahayn waxay noqon kartaa dhibaato. Kooxda Actualidad iPhone mas'uul kama aha waxyeello kasta oo aad u geysato qalabkaaga adoo adeegsanaya qaabkan DFU. Dhaqdhaqaaqa habka DFU waa fududahay laakiin wuxuu u baahan yahay tallaabooyin taxane ah si looga hortago wixii isku-dar ah ee aasaasiga ah ee dhaqaajinaya qaabkan. Waxaan si fudud ku qasbanaaneynaa inaan raacno talaabooyinkan aan hoos uga tagnay iyo iPhone 11 iyo moodooyinka intiisa kale ayaa howlgelin doona.
Fiilooyinka iPhone-ka ee 'Mac' ama 'PC' oo fur iTunes
Waxaan riixeynaa badhanka mugga
Hadda waxaan riixeynaa badhanka mugga
Badanaa waa inaanu riixnaa oo qabannaa badhanka / deminta iyo badhanka hoose
Shaashadu waxay noqon doontaa madow. 3 ilbidhiqsi kadib waxaan sii deyneynaa badhanka on / off oo waxaan sii wadnaa inaan hoos u dhigno badhanka mugga hoos
Farriin ayaa ka muuqata Mac ama PC waana aqbalnaa
Ugu dambayn daaqadda qaabka soo kabashada ayaa soo muuqan doonta isla markaana daqiiqaddaas waxaan sii deyn doonnaa badhanka mugga hoos u dhigaya
Haddii aynaan rabin in aan ku sii wadno habka DFU firfircoonaan ayaan uga bixi karnaa dhibaato la'aan. Si aad uga baxdo qaabka DFU waxa aan sameyno waa wax ka fudud:
Waxaan riixnaa badhanka mugga hal mar
Riix badhanka mugga hoos mar
Hoos u dhig batoonka midigta calaamadda Apple-na way soo muuqan doontaa
Habka soo kabashada ama «habka soo kabashada». Sidan ayaa loo hawlgeliyaa
Si loo sameeyo habka soo kabashada waa inaan raacnaa talaabooyin kale oo xoogaa fudud. Sida qaabka DFU, tan waxaa loogu talagalay isticmaaleyaal khibrad badan leh, markaa haddii dhibaato kaa timaaddo iPhone-ka waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho SAC-ga Apple ama aad u dhowaato adeeg farsamo oo idman. Dhanka kale, dhib maahan inaad tijaabiso qaabkan oo aad khibrad u leedahay, laakiin waa inaad ogaataa waxaad ciyaareyso. Si aad u kiciso qaabkan waxaan raacnaa talaabooyinkan:
Waxaan fureynaa iTunes oo waxaan ku xirnaa qalabka
Waxaan riixnaa oo sii deynaa badhanka si loo kordhiyo mugga
Waxaan riixnaa oo sii deynaa badhanka si aan hoos ugu dhigno mugga
Waxaan haynaa badhanka kore oo la riixay ilaa qalabku bilaabo inuu si toos ah dib ugu bilaabo
Waxa kaliya ee haray waa inaad riixdo oo aad qabato badhanka kore ilaa aaladda ka gasho habka soo kabashada.
Hel qalabkaaga kombuyuutarka iyo markaad aragto ikhtiyaar u soo celinta ama Cusboonaysiinta, waxaan xulnaa midka noogu habboon. iTunes wuxuu isku dayi doonaa inuu dib u cusbooneysiiyo macruufka isaga oo aan tirtirin xogta aan ku hayno iPhone-keena. Sug iTunes si aad u soo dejiso barnaamijka aaladdaada. Haddii soo dejintu ay qaadato wax ka badan 15 daqiiqo oo qalabku ka baxo shaashadda qaabka soo kabashada, sug sugitaanka soo dejista oo ku soo celi hawsha markale mar haddii ay ku fashilantay mar uun.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo dhigo iPhone 11 cusub DFU, dami ama qaabka soo kabashada
99% ka mid ah bogaggu waxay galayaan isla qaladkii., .. waa inaad haysataa IPhone-ka markaad shidanayso ama damineyso ... qofna ma yiraahdo
Ku jawaab trouxx
Bots iyo matchmaking ayaa ugu dambeyntii u imanaya Fortnite iyagoo wata cusbooneysiintii ugu dambeysay
Taxanaha 5 "marwalba muujinta" muuqaalka wuxuu cunaa batteri aad u badan